Hotel Royal Crown Hotel Palm Spa Indzawo yekungcebeleka, Phuket, Thailand: izithombe kanye nokubuyekeza
Kulesi sihloko encane sizoxoxa ngesinye ehhotela emangalisayo, etholakala e-India. Uma ufuna ukuphumula okuhle, qiniseka ukuza lapha, uzongithanda it!
Royal Crown Hotel Palm & Spa Indzawo yekungcebeleka - Leli hhotela itholakala amakhilomitha 58 kusuka esikhumulweni sezindiza, ku eyehlelayo entabeni, ngo-green, ndawo. Ukuphakama indawo yayo ngaphezu kolwandle - amamitha amathathu nanhlanu. Le ndawo kufana nokuthi 10 esingamahektare (4 hectares) exotic ehlathini elicinene ukuthi kungenziwa kufanele ngokuthi izingadi ezindaweni ezishisayo. Kulula kanjalo ukuzizwa ubunye yakho nemvelo: ohelezayo ohlabayo ezivela olwandle, ngomusa nokuhashazela kwamaqabunga nokucula izinyoni ezingabonwayo angavamile.
Ukuze kolwandle (Patong Bay isikhungo) kuyodingeka ukuhamba cishe ikhilomitha, kusukela ehhotela itholakala ogwini lolwandle lwesithathu. Nokho, izivakashi akudingeki ukufinyelela kolwandle ngezinyawo, ngoba ngosuku (kusukela 10.00 ekuseni kuya 16,00 ntambama) njalo ngemuva kwamahora amabili kuya ebhishi inohlelo Shuttle ekhethekile.
Hotel Royal Crown Hotel Palm & Spa Indzawo yekungcebeleka ethulile kakhulu futhi ethokomele, naphezu kweqiniso lokuthi liseduze kakhulu ukuzijabulisa eyinhloko Patong, lapho ungathola ebusuku amaqembu, imigoqo kanye nezitolo. Ukuze Jungceylon Isikhungo sokuthenga kuyinto ngaphakathi ukuhamba ibanga (kuthatha imizuzu embalwa kuphela) noma ebhasini ekhethekile.
Zokuhlala impahla Isikhwama
Njenganoma yimuphi wena izivakashi zakho ehhotela inkanyezi ezintathu self-ukuhlonipha, Royal Crown Hotel Palm & Spa Indzawo yekungcebeleka has konke okudingayo ukuze ukuhlala ukhululekile futhi ukuphumula. Kukhona 63 Bungalows nokwakha yokuhlala ehlanganisa ezine izibuya. Lesi sakhiwo ekamelweni lokudlela sizimele ukuya, udinga ukukhuphuka intaba kancane ephakeme.
Ngamunye emakamelweni ejwayelekile 154 ayatholakala:
Omunye double noma ezimbili imibhede olulodwa. Uma kudingeka, kungase kufake uhlaka owengeziwe.
Desk, isibuko, sezinyawo nezihlalo. Optionally, ungakwazi ukufunda incwadi noma ahlale laptop, kanye mhlawumbe ukubhala idayari ngayekubonile okunye, ngenkathi zisatholakala fresh.
A yokugezela yangasese, okuyinto has a eshaweni, zokugeza yokuthopha kanye izinwele dryers.
Air conditioning, ngakho izivakashi ungazizwa ukungakhululeki wokuba ezindaweni ezishisayo ucingo ezindaweni ezishisayo.
Balcony, lapho nganoma isiphi isikhathi uhlale, ukuphefumula umoya ohlanzekile, futhi zibabaza ukubukwa okuvula ingadi enhle ezishisayo, kolwandle noma echibini.
Satellite TV kanye nefoni, uma ungafuni ukuba aphule kude ekuphileni evamile ngokuphelele.
Minibar nge khulula amanzi ebhodleleni.
Safe lapho ungakwazi ushiye imali futhi imibhalo ngokuphepha.
Uma ufuna yobumfihlo futhi ungafuni omakhelwane emva kodonga, ungahlala omunye 63 Bungalows sizungezwe amasundu zonke izinhlobo amakhambi. Kuphela uma uzizwa ngempela ngesikhathi esisodwa nemvelo. Kukho konke lokhu Bungalow has zonke ezidingekayo ophucukile indoda ukunethezeka kuhlanganise air conditioning.
Ngaphandle ukuzijabulisa eyinhloko izivakashi eza esiqhingini Phuket - kolwandle nge lolwandle sandy - Royal Crown Hotel Palm & Spa Indzawo yekungcebeleka linikeza ezinye izindlela zokuzijabulisa:
eduze yokudlela pool ilungele ukhetho olukhulu Thai izitsha ukunikela, futhi uthanda into uzobajayela - European izitsha.
Ukufaneleka isikhungo evulekile kulabo ngisho eholidini ayikuvumeli yena ukuzikhohlwa ukuqeqeshwa ngizigcine ngiwumqemane.
The Royal Crown Hotel Palm & Spa Indzawo yekungcebeleka 3 *, ungenza kahle futhi table tennis noma snooker.
Ukuze lwenzeke kithi lolu ukuphumula ephelele, ungaya bendabuko massage Thai, uphumule sauna noma isisi endlini.
Isabelo has okubhukuda ezine, esikhulu, ingane, "Palm kuyona" "nezinkathi ezintathu".
Ngaphezu kwalokho, Royal Crown Hotel Palm & Spa Indzawo yekungcebeleka oluyohlala izivakashi amasevisi zaso ezingeziwe ezilandelayo:
Isikhungo ibhizinisi imihlangano yebhizinisi kanye nemicimbi.
Kokubona futhi izivakashi isikhungo, lapho ungakwazi ukuthenga amathikithi ukuya uhambo ngesikebhe eziqhingini, okuyizinto inqwaba zaseThailand. Lokhu kuyindlela enhle ukubona zindawo ezimangalisayo, lokho ayisekho kuphi emhlabeni, uthole ukuvela okuningi futhi imizwelo eyakhayo.
Ukuphepha zezivakashi lunikeza ukulondeka, ukusebenza amahora angu-24 ngosuku.
Mahhala yokupaka, Shuttle ezinsizeni lolwandle futhi pay ezokuthutha (kuhlanganise izimoto eziqashisayo).
Ikhilomitha elilodwa kusukela Royal Crown Hotel & Palm Spa Indzawo yekungcebeleka kuyinto ebhishi edume kakhulu Phuket mhlawumbe - Patong (Patong). Lokhu bay, okuyinto mayelana angu-3 ugu igcwele elinesihlabathi esimhlophe ngasemaphethelweni. Emhlabeni lolwandle ilanga loungers, bangakwazi kuqashwe usuku cishe 100 baht Thai.
Kube ogwini futhi service enhle. Ngokwesibonelo, uma ufuna isiphuzo, oweta friendly ngaphandle kwezinkinga podnesut ukuba ilanga loungers, ungakwazi ke qhubeka iholidi lakho. Lapha iya abathengisi ukuthi ubani ongathenga eziyisikhumbuzo engabizi noma ezinye okukhona.
Itholakala endleleni lolwandle. Uma uya ohlangothini lwawo okuphambene, uzithola emgwaqweni edolobheni nge zokudla, nemishayo, izitolo kanye nezinye izithelo impucuko.
Patong Beach ithandwa kakhulu e Phuket, kodwa ngoba izivakashi eziningi zinikezwa izindlela ezahlukene ukuzijabulisa: ukuqasha surfboard, Ukushushuluza amanzi, noma "banana". Uma wayefisa, ungakwazi ukuqasha (noma ukuthenga) nemishini snorkel ubunyoninco izwe ngaphansi kwamanzi we zamakhorali zamakhorali.
Kukhona leli bhishi kanye lokususa encane. Njengoba itholakala olwandle ngemva kweziphepho yamuva ngoba ekhathazwa amanzi isikhashana uhlala ngempela ezingcolile.
Enye lolwandle zithandwa kodwa ngaphansi ophithizelayo - Karon, akhiwe kude 5 amakhilomitha kusuka Royal Crown Hotel & Palm Spa Indzawo yekungcebeleka. ubude bayo - ezine amakhilomitha. Lonke ogwini ngisho ingxenye ukuhamba eceleni komgwaqo, ugcwele isihlabathi segolide. Lapha, isimo kuthule ubumfihlo, nakuba ayengazi kude, futhi amahhotela eminingi. Vele njengase Patong, ukunikela izivakashi a izinhlobo zakudala beach fun nokuzijabulisa.
Kubalulekile nokukhumbula ukuthi zemvula Karon Beach zigcwele izingozi eziningi ngoba ukuphumula. Kungazelelwe undercurrents abasafufusa bayakwazi ukufeza phakathi olwandle, ngisho lowo ungabiza uzenza umbhukudi abanolwazi. Nokho, lolwandle abatakuli unake phezu isimo futhi ingozi lomcimbi sibekezelele ogwini namafulege abomvu.
Yiqiniso, emabhishi - lokhu kuyinto enhle kakhulu. Kodwa lapho ukuya ngemva kwelanga izivakashi uyalangazela nightlife ogqame kakhudlwana? Impendulo yalo mbuzo silula. Nje ikhilomitha ukusuka Royal Crown Hotel & Palm Spa Indzawo yekungcebeleka (Phuket) iyona edume ukuzijabulisa emgwaqweni okuthiwa Bangla Road. umculo Rhythmic ezikhanga ukuzijabulisa izindawo ezihlukahlukene.
Avela ngakwesokudla Bangla Road, ungakwazi ukubheka cafe nge cuisine exotic futhi European, uhlale endaweni yokudlela ngomculo bukhoma ngokwengqondo. Kaningi kukhona ukuphila ukusebenza kwabo iqembu Philippine. Ngaphezu kwalokho, kukhona ezemidlalo Amabha lapho ubhiya ndawonye nabanye abalandeli ukubukela phezu screen big ukusakazwa yemidlalo ezemidlalo.
Ukulula ohlangothini kwesokunxele Bangla Road, izivakashi bangene ngezokuzijabulisa omdala: go-go futhi strip-Amabha at zonke sinyathelo. Ngigqoke izinto izingubo sexy futhi okuyenga (futhi ngezinye izikhathi ngisho ngaphandle izingubo) ubuhle nokudansa nge nesigxobo. Ngezinye izikhathi lezi Amabha zitholakala ngqo kubha. Naphezu entry khulula ezikhungweni ezinjalo, abahambi lapha ngempela kufanele oda utshwala. Nokho, ukubona into ezithakazelisayo, ngezinye izikhathi akukhona ngempela ukuthi ngisho ukuya izikhungo ngaphakathi, njengoba abaculi abaningi futhi abadansi enze emgwaqeni.
Izivakashi ushiye mayelana Royal Crown Hotel & Palm Spa Indzawo yekungcebeleka libuyekeza zihlukahlukene, kodwa esikhathini esiningi omuhle. Bathi kukhona Inhlonipho ezahlukene kanye nobungane kwabasebenzi nokuhlanzeka lamakamelo (nsuku zonke yokuhlanza service).
Naphezu kweqiniso lokuthi indlela eya olwandle kuqala kungase kubonakale okude (amakhilomitha angaba nengxenye), izivakashi bathi kuyinto kunalokho plus. Phela, ibanga kusuka ebhishi kuyinto enomunyu futhi ukuthula, uhambe imizuzu engu-15 akuyona inkinga enkulu. Ngaphezu kwalokho, kusukela ehhotela kuya ebhishi ungahlala ukufinyelelwa noma ibhasi mahhala, noma ukuqasha ibhayisikili futhi gibela umoya ohelezayo. indawo enjalo ehhotela, ngokuvumelana abahambi, isici esihle: esondelene kakhulu zonke wedolobhakazi uthanda lo ziphile amathilomu, amakilabhu, zokudlela kanye nezitolo.
Makalale Royal Crown Hotel & Palm Spa Indzawo yekungcebeleka 3 * ngempela efana ukubukwa kusukela amakamelo kanye Bungalows. Ngenxa yokuthi ihhotela isendaweni egqumeni elincane, ngisuka esitezi engangikuso, ungajabulela kolwandle noma ihlathi eliluhlaza. ungakhetha amakamelo esibheke amafasitela echibini uma ufisa. Futhi kwesokunxele izivakashi eRoyal Crown Hotel & Palm Spa Indzawo yekungcebeleka isithombe akunakwenzeka ukuba abashiye ubani nandaba.
Ngokuvamile, ngokuvumelana wavakashela leli izivakashi ehhotela, ukuthi livumelana ngokugcwele izinkanyezi zawo ezintathu. Kunconywa kulabo abafuna uphumule futhi uthole injabulo Isabelomali izwe angavamile.
Ihhotela sise 31 Na Nai Rd, Patong Beach, Phuket 83150, Thailand ..
Izinombolo zocingo contact: +66 (0) 7634-09-75 / 76/77/78, +66 (0) 7634-04-63. Fax: +66 (0) 7634-03-76.
Kulesi sihloko, sizokhuluma wachaza ngokuningiliziwe ehhotela, lo amabhishi engcono, okuyizinto eziseduze izikhungo, ezikhangayo nokuningi. Sithemba ukuthi lokhu okuthile okubalulekile eye yakusiza ngayo!
Ihhotela e Phuket 4 Diamond futhi umlingani wakhe Bulgarian
Ihhotela Santa Marina Holiday Village 4 * (Sozopol, Bulgaria): incazelo, imisebenzi, ukubuyekeza
"Ngemva kwesikole." Abalingisi kanye izindima
Izindleko eziguqukayo - indlela yokunciphisa izindleko
Idili emkhunjini. Qasha umkhumbi. A uhambo ngesikebhe nge idili
Umzali kufanele kube umthandazo lesifanele
Contact lens: ukubuyekeza amathuba abo kanye nebubi